I-CHIEFS IBUYE NGAMANDLA | Scrolla Izindaba
I-CHIEFS IBUYE NGAMANDLA
Iqembu le-Kaizer Chiefs elizethembayo liqhubeke nefomu yalo yokunqoba ngenkathi abaholi be-log ye-DStv Premiership i-Mamelodi Sundowns ilahle amaphuzu abalulekile emidlalweni yangoLwesibili.
Ku-Makhosi kube wukunqoba kwabo okukhulu kule sizini.
Ishaye i-Tshakhuma Tsha Madzivhandila ngamagoli amathathu eqandeni. Ngakolunye uhlangothi i-Sundowns ibanjwe ngeqanda eqandeni ekhaya idlala ne-Bloemfontein Celtic.
Lokhu kudlala ngokulingana kushiye i-Swallows esendaweni yesibili inethuba elikhulu lokuba phezulu uma inganqoba kusasa emdlalweni wayo ne-Chippa United.
Iphuzu elikhulu kube wukunqoba kokuqala kwe-Chiefs ekhaya okuyinto abayenze ngendlela ekholisayo. Abadlali basesiswini abasebancane, uNkosingiphile Ngcobo noHappy Mashiane baqhubeke nefomu labo lokushaya amagoli.
Baphinde babhalisa amagama abo emaphepheni ngoLwesibili ngoNgcobo enika i-Chiefs igoli lokuqala esiwombeni sokuqala noMashiane ebuya ebhentshini esiwombeni sesibili eshaya igoli lokunqoba. Laba bobabili baphinde bashaya amagoli ngesikhathi i-Chiefs inqoba ngamagoli amabili kwelilodwa ekuhambeni idlala ne-Cape Town City ngoMgqibelo.
ULebohang Manyama, naye oqhamuka ebhentshini, ushaye igoli ekuthinteni kwakhe okokuqala ibhola enikeza i-Chiefs ukuhola ngamagoli amabili eqandeni. Umdlali ovelele kulo mdlalo nguSamir Nurkovic obebaluleke kakhulu kuwo wonke amagoli e-Chiefs.
Uqokwe njengomdlali ovelele ekupheleni komdlalo futhi wanikela ngomklomelo wakhe kubalandeli baMakhosi.
“Iqembu elikhulu njenge-Chiefs alifanelwe yilutho ngaphandle kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo. Bekubuhlungu ukuyibona idonsa kanzima ekuqaleni. Kodwa manje sengibuyile futhi ngiyawujabulela umdlalo wami. Abalandeli be-Chiefs bafanelwe ukujabula ngaso sonke isikhathi,” kusho uNurkovic.
Ukunqoba i-Tshakhuma bekungokwesithathu kwe-Chiefs kulandelana futhi kuyibeke endaweni yesikhombisa. KuTshakhuma ukunqotshwa kuyehlise endaweni ebibekiwe.
Bahlala endaweni ye-15 kodwa bangazithola begxile ezansi uma i-TS Galaxy, esendaweni ye-16, inganqoba kusasa emdlalweni wayo ne-Maritzburg United.
Khonamanjalo, umqeqeshi we-Swallows uBrandon Trutter nomdlali wasesiswini uRuzaigh Gamildien baqokwe njengomqeqeshi nomdlali wenyanga ngoZibandlela/ Masingana. Lona bekungumklomelo wesibili kaTrutter wezinyanga ezimbili ngokulandelana.